Kallattiiwwan qulqullina barnootaa mirkaneessuuf eeraman
Waancaan liigii pirimeerii yeroo jalqabaatiif Gibee ce'e - Saturday, 21 July 2018 21:02
Duudhaa simannaa keessummaa cimee ittifufuu qabu - Saturday, 21 July 2018 20:41
Tika nageenya biyyaalessaa saffisa odeeffannoo ammayyaatiin walsimsiisuu - Saturday, 21 July 2018 20:38
Marii barattoota qaxalee ministira muummee wajjin - Saturday, 21 July 2018 20:36
InjiinarTaakkalaa Uumaa Bantii kantiibaa 31fa Finfinnee - Saturday, 21 July 2018 20:34
Obbo Dassaalany Waaqjiraa
Itoophiyaatti dhimmoota damee barnootaa yaaddessaa jiran keessaa tokko rakkoolee qulqullina barnootaatiin walqabatan ta’uu ogeessotni damee kanaa ni ibsu. Kunis, barnootni furtuufi si’eesssituu ummata biyyattii yoo ta’u, qulqullinaan yoo hinkennamnev labata dammaqaafi eenyummaasaa falmachuu hindandeenye uumuun rakkisaa waan ta’eefidha.
Akka Oromiyaatti qulqullina barnootaa mirkaneessuuf waggoota darban keessatti hojiileen hedduun hojjetamaa turaniyyuu guutummaatti furuun akka hindanda’amne Biiroon Barnoota Oromiyaa tibbana konfiransii barnootaa Magaalaa Adaamaatti gaggeesserratti ibseera. Kanaanis Oromiyaatti ammayyuu qulqullinni barnootaa rakkoo waan ta’eef kallattiiwwan bara egeree kaa’amuunsaanii eerameera.
Daarektarri qophiifi hojiirra oolmaa karoora biirichaa, Obbo Dassaalany Waaqjiraa sababoota mirkanaa’uu dhabuu qulqullina barnootaa konfiransicharratti dhiyeessaniin akka ibsanitti, wayita ammaa rakkoolee damee barnootaa keessatti mul’achaa jiran keessaa tokko mirkanaa’uu dhabuu qulqullina barnootaati. Naannoo Oromiyaa keessattis ammayyuu qulqullinni barnootaa haala yaaddessaarra jira jedhanii, kana furuuf Biiroon Barnoota Oromiyaa ciminaan hojjechaa tureera; bara dhufuuf kallattiiwwan kaa’amaniiru.
Haala kanaan sadarkaa gadii hanga oliitti hoggantoota ilaalchaan, gahumsaafi beekumsaan istaandaardii guutan ramaduun murteessaa ta’uus itti manameera jedhu. Kana waliinis barsiisota gahumsaafi dandeettii olaanaa qaban sirnaan qabachuufi mirgasaanii haalaan eeguunis yeroo kamuu caalaa barbaachisaa ta’uu himaniiru.
Akka ibsa Obbo Dassaalanyitti, durumaa kaasee filannoon kaadhimamtoota barsiisotaa rakkoo waan qabuuf adeemsa keessa qulqullina barnootaarratti dhiibbaa guddaa geessiseera. Kana sirreessuunis barbaachisaa waan ta’eef, adeemsa filmaata kaadhimamtoota barsiisotaa, dandeettii simannaa kolleejjotaafi jireenya leenjitootaa fooyyessuuf bal’inaan hojjechaa jirraa jedhaniiru. Kanaanis kaadhimamtoota barsiisota dubaraa doormii taa’anii akka leenji’aniif kallattiin taa’uusaa eeraniiru.
Akka guutuu Oromiyaatti manneen barnootaa kallattii hundaan istaandaardii gadi ta’anis fooyyessuun, leeccalloon guutuuf biiroonsaanii haalaan sochii taasisaa jiraachuu dubbataniiru. Kana waliinis manneen barnootaa marti manneen yaaliitiin, manneen kitaabaatiin, handhuura gabbisa barnootaafi kanneen birootiin guutuuf yeroo kamuu caalaa ciminaan hojjetamaa jira jedhu. Hoggansi barnootaa sadarkaa sadarkaan jirus kana hubachuun gahee isaarraa eegamu bahachuu akka qabus yaadachiisaniiru.
Keessumaa ammoo damee barnootaa keessatti teknolojii qunnamtii odeeffannoo ('ICT') waliin walbaruun rakkisaa waan ta’eef, Oromiyaa keessaa barattootni komputara ijaan osoo hinargiin yunivarsiitiiwwan addaddaa seenan xiqqaa miti. Kunimmoo haala qabatama yeroo ammaa waliin yaaddessaa waan ta’eef, dhimma xiyyeeffannoo fedhu ta’uu yaadachiisaniiru.
Hogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa, Doktar Tolaa Bariisoos gamasaaniin, dhimmi qulqullina barnootaa dhimma qaama tokkoo qofa osoo hintaane hojii qindoominaan galma gahuu danda’uudha jedhu.
Qulqullina barnootaa mirkaneessuun xiyyeeffannoo hoggansaasaanii ta’uu ibsanii, keessumaa ammoo ijaarsa geengoo qulqullina barnootaa ykn damee ummataa cimsuun murteessaadha. Kana waliinis hanqinoota hoggansa barnootaa keessa jiraniifi bajata waliin walqabatanii jiran furaa deemuun dhimmoota akka kallattiitti taa’an ta’uus eeraniiru.
Barnootni qulqullina qabu dhalootaaf daandii qaroomina argisiisa waan ta’eef, keessumaa gahumsaafi beekumsaan hogganamuu akka qabu xiyyeeffatameera jedhu. Gama kanaan hojiileen hanga ammaa hojjetaman jajjabeessoo ta’aniyyuu hanqinaaleen mul’achaa jiran heddu ta'uufi bara dhufu rakkoolee kanneen yeroo yerootti furaa deemuun ammoo akka kallattiitti kaa'amuusaa eeraniiru.
Torban kana/This_Week 4893
Guyyaa mara/All_Days 1642488